सँगैका ब्याची आईजीपी, जुनियर एआईजी र डिआईजी बन्दा चौधरीको एसएसपीबाटै अवकास ! - Kantipath.com
सँगैका ब्याची आईजीपी, जुनियर एआईजी र डिआईजी बन्दा चौधरीको एसएसपीबाटै अवकास !
२०६७ सालमा १ नम्बर डिएसपी दिलिप चौधरीको बढुवा भयो । उनको ब्याचबाट शैलेश थापा क्षेत्री, निरज शाही, हरि पाल, प्रद्युम्न कार्की र देवबहादुर बोहरा एसपीमा बढुवा भएका थिए । चौधरी एसएसपीबाट अवकाश पाउने भएका छन् । एसएसपीका ५५ वर्षे उमेरहद कारण चौधरीले यही असार १० मा अवकाश पाउने छन् ।
उनीभन्दा जुनियर ब्याचका विश्वराज पोखरेल एआइजी भइसकेका छन् भने जुनियर ब्याचका अरु थुप्रै डिआइजी छन् । सहकुल थापा, धीरज प्रताप सिंह, वसन्त लामा, रवीन्द्र धानुक, उत्तम सुवेदी, अरुण विसी, दिवेश लोहनी, मुकुन्द आचार्य चौधरीभन्दा जुनियर भएपनि डिआईजी भइसकेर इन्चार्ज खाइसकेका छन्।
त्यस्तै, उमेरहदकै कारण एसएसपीद्वय देवबहादुर बोगटी र किशोर कुमार दाहालले अवकाश पाएका छन् । उनीहरु दुवै जना चौधरीकै ब्याची हुन् । उनीहरु पनि डिआइजी बढुवामा छुटेका थिए । एसएसपीहरु सौरभ राणा, राजेन्द्र चौधरी, शेखर कोइराला, प्रदीप कुमार श्रेष्ठ पनि डिआईजि बन्ने या नबन्ने अन्यौल छ ।
Previous Previous post: सेजल कोइरालाको मृत्यु प्रकरणका आरोपित नियन्त्रणमा
Next Next post: संसद भवनभित्र नेताहरुको कुटाकुट (भिडियोसहित)
प्रधानन्यायाधीशले पद नछाडे संसदले छानबिन थाल्नुपर्छ : पूर्वन्यायाधीश फोरम
जनता आवास कार्यक्रम : घर ठडिए, भुक्तानी आएन
काठमाडौं प्रशासनलाई गृहको निर्देशन–डेढ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउनू
कञ्चनपुरको पुनर्वामा एमाले बिजयी !
जग्गाधनीलाई थाहै नदिई तीन कट्ठा जग्गा बेचिएपछि
नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न बोर्णबहादुर कार्कीको रिटमा अन्तरिम आदेश
नेपालले नाप्यो सगरमाथाको उचाइ, घोषणा गर्न चीनसँग समन्वय हुँदै